" ကြီးပြင်းလာတဲ့ အဆင့်ချင်းမတူဘူးလို့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး " - Cele Connections
” ကြီးပြင်းလာတဲ့ အဆင့်ချင်းမတူဘူးလို့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး “
Candy | 14/04/2020 | Celebrity | No Comments
CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးရေ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ အသားအရေဆိုအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လှပလွန်းလှတဲ့ရှမ်းတရုတ်ကပြားမလေးဆိုတာ အထူးတလည်ပြောပြစရာမလိုလောက်ပါဘူးနော်။သူမကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလည်းဖြစ်သလို အဆိုပိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော် ။
ဆယ်စုတစ်တစ်ခုအကြာထဲက သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားလောက်တဲ့ထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ လက်ရှိမှာလည်း သီချင်းအသစ် Music Video တွေ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိကာ ပရိသတ်တွေကြားမှာ အပြောများနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလို့တောင် ဆိုရမှာပါ။
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် G Fattနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ဝေဖန်မှုတော်တော်များများကို ခံခဲ့ရသူပါ။ လမ်းခွဲ ပြတ်စဲပီးအချိန်တော်တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ နန်းဆုတစ်ယောက် ” My Dayတွေလာလာခိုးမကြည့်ပါနဲ့ ဘာတင်တင် ကွကိုယ်လိပ်ပြာမလဲုတာလဲ မဖြစ်ကြပါနဲ့ ” ဆိုတဲ့ စာလေးတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ” ခက်တာကကြီးပြင်းလာကြတဲ့ ပုံစံမတူကြဘူးလေ “ဆိုတဲ့ ပေါက်ကွဲချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ ချစ်သူဟောင်းကို ပြန်လည်ပြောဆိုနေတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပါ။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရော နန်းဆုတင်ထားတဲ့ စာလေးတွေကကဘယ်သူ့ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ ထင်ပါလဲ ပရိသတ်ကြီး…. ။
Source: Nansu Yati Soe
” ကွီးပွငျးလာတဲ့ အဆငျ့ခငျြးမတူဘူးလို့ ပတျသကျခဲ့ဖူးတဲ့တဈစုံတဈယောကျကို ဒဲ့ပွောလိုကျတဲ့ နနျးဆုရတီစိုး ”
CeleConnectionsပရိသတျကွီးရေ နနျးဆုရတီစိုးကတော့ အသားအရဆေိုအပွဈပွောစရာမရှိအောငျလှပလှနျးလှတဲ့ရှမျးတရုတျကပွားမလေးဆိုတာ အထူးတလညျပွောပွစရာမလိုလောကျပါဘူးနျော။သူမကတော့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးလညျးဖွဈသလို အဆိုပိုငျးမှာလညျးအောငျမွငျတဲ့ သူတဈယောကျဆိုတာ မှားမယျမထငျပါဘူးနျော ။
ဆယျစုတဈတဈခုအကွာထဲက သီခငျြးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားလောကျတဲ့ထိ အောငျမွငျခဲ့တာပါ။ လကျရှိမှာလညျး သီခငျြးအသဈ Music Video တှေ ဆကျတိုကျထှကျရှိကာ ပရိသတျတှကွေားမှာ အပွောမြားနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးလို့တောငျ ဆိုရမှာပါ။
နိုငျငံကြျောအဆိုတျော G Fattနဲ့ နှဈဦးသဘောတူလမျးခှဲပွီးတဲ့နောကျမှာ ဝဖေနျမှုတျောတျောမြားမြားကို ခံခဲ့ရသူပါ။ လမျးခှဲ ပွတျစဲပီးအခြိနျတျောတျောကွာပွီဖွဈတဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ နနျးဆုတဈယောကျ ” My Dayတှလောလာခိုးမကွညျ့ပါနဲ့ ဘာတငျတငျ ကှကိုယျလိပျပွာမလဲုတာလဲ မဖွဈကွပါနဲ့ ” ဆိုတဲ့ စာလေးတငျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ” ခကျတာကကွီးပွငျးလာကွတဲ့ ပုံစံမတူကွဘူးလေ “ဆိုတဲ့ ပေါကျကှဲခကျြတှကွေောငျ့ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားကတော့ ခဈြသူဟောငျးကို ပွနျလညျပွောဆိုနတေဲ့မှတျခကျြတှပေေးနကွေတာပါ။ CeleConnections ပရိသတျကွီးရော နနျးဆုတငျထားတဲ့ စာလေးတှကေကဘယျသူ့ကိုရညျညှနျးတယျလို့ ထငျပါလဲ ပရိသတျကွီး…. ။
“သူမရဲ့ သက်စေ့ dead body (28) လောင်းကျော်ရဲ့ ဘဝေ နဝင်ချိန်များကို အေးချမ်းစွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို မျှဝေလေိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်”
“ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးငယ်ဂေဟာအတွက် အလှူငွေကျပ်(၃)သိန်းကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခင်ပိုးပန်းချီ”
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ အတွဲညီခဲ့သလို အပြင်မှာလည်း ပြောမနာဆိုမနာ ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ဖွေးဖွေးအတွက် အစဉ်အလာမပြတ် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ အလင်းရောင်
“မိခင်ဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ မိုးပြိုကျသွားသလိုပဲ ခံစားရတယ်လို့ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး”